Ungasisebenzisa kanjani isici somlayezo oyimfihlo - imibuzo ethi "Ukwenziwa kanjani" ehlobene neForamu - Iforamu yeKalimba
Isetshenziswa kanjani i-Priv...
[Okunamathelayo] Ungasisebenzisa kanjani isici Somlayezo Oyimfihlo
Ungamthumela kanjani umsebenzisi ku-DM esithangamini?
Ungawusebenzisa kanjani umsebenzi womlayezo oyimfihlo weForamu?
umyalezo wangasese Ukufundisa ividiyo DM kanjani DM
Ngidale isifundo sevidiyo esifushane ukuze ngibonise indlela yokusebenzisa isici somlayezo oyimfihlo siyasebenza.
I-Topic Tags: umyalezo oyimfihlo (1), isifundo (2), ividiyo (1), I-DM (1), kanjani DM (1),
Latest Post: I-Poll - Flat board noma i-Resonance box? ilungu lethu entsha: madelinerepass Okuthunyelwe kwakamuva Okungafundiwe Okuthunyelwe Amathegi